Aghụghọ iwepụ ngwa na Windows | Akụkọ akụrụngwa
Na weebụ ndị mmepe nwere atụmatụ dị ukwuu nke nwere ike inyere anyị aka iwepụ ngwa Windows ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala, nke nwere ike ịnọchite anya akwụkwọ ikike akwụ ụgwọ na ndị ọzọ n'efu. Na ọkwa gara aga anyị kwadoro iji ngwa ọrụ na-atọ ụtọ nke nwere ike inyere anyị aka "ịwepụ iwepụ" ngwa ndị siri ike iwepụ na sistemụ arụmọrụ anyị.
Typesdị ndị ọzọ dị irè naanị mgbe enwere nsogbu na iwepu ngwa na Windows, ihe na-adịchaghị ma yabụ, a ga-eji ụdị ndị ọzọ; tupu oso iji - ngwa nwere ike imebi ndekọ Windows, ọ ga-adị mma ịnwa iji ụfọdụ ndị ọzọ a, nke na-agaghị anọchite anya ụdị ihe egwu ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke sistemụ arụmọrụ.
1 Mbụ ọzọ iwepụ Windows ngwa
2 Nke abụọ ọzọ iwepụ Windows ngwa
3 Nke atọ ọzọ iwepụ ngwa na Windows
Mbụ ọzọ iwepụ Windows ngwa
Methodszọ na ụzọ ndị ọzọ anyị ga-atụ aro n'okpuru nwere ike tinye ya maka Windows 7 yana maka nsụgharị kachasị ọhụrụ. Na nke mbụ a, anyị ga-atụ aro usoro ndị a:
Anyị na-aga kwupụta «Ogwe njikwa»Windows
Site na nhọrọ egosiri anyị họrọ «Programs-> Iwepụ ihe omume".
Site na ndepụta egosiri, anyị na-pịa abụọ ngwa na anyị chọrọ iwepụ.
Window nkwenye nwere ike ịpụta igosi ịrụ ọrụ a.
Igbe ọzọ nwere ike ịpụta, nke ga-enyere anyị aka wepu nhazi ma ọ bụ wepu ụfọdụ akara nke ngwa ahọpụtara.
Ka anyị gosi ihe anyị mere site na ịpị bọtịnụ OK na windo ahụ.
Nke ahụ bụ ihe niile anyị ga - eme na nke mbụ a, ma eleghị anya ọ dị mkpa, ka anyị bidogharịa Windows ka mgbanwe ndị ahụ wee nwee mmetụta; usoro dị irè dịkwa mgbe anyị chọrọ iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ arụnyere na Windows.
Nke abụọ ọzọ iwepụ Windows ngwa
Uzo ozo nke anyi gha ekwu banyere n'okpuru enwere ike iji ya mgbe ihe oru ma obu onye na-acho anyi choro iwepu ya nwere ngwaike. Iji mee nke a, anyị ga-abanye na mpaghara ebe ngwaọrụ anyị niile dị, na-enwe ike imezu ebumnuche anyị na usoro ndị a:
Anyị na-chọta akara ngosi nke «PC m»Na Windows desktọọpụ (ọ bụghị ya shortcut).
Anyị na-ahọrọ ya na bọtịnụ nri nri yana site na menu ndị anyị na-ahọrọ na-ahọrọ «Njirimara".
Site n'aka ekpe sidebar anyị họrọ nhọrọ na-ekwu «Onye nchịkwa ngwaọrụ".
A ọhụrụ window ga-emeghe, na ị ga-aga «Onye njikwa".
N'ebe ahụ, anyị ga-ahọrọ taabụ nke na-ekwu «Iwepu»Ma mechie windo na«kwenye".
Dị ka anyị tụrụ aro na mbụ, usoro a nwere ike inye aka mgbe ọ dị mkpa Wepu ụfọdụ software jikọtara na ngwaike, nke ahụ bụ, nye onye nchịkwa nwere ike. Ọ nwekwara ike ịdị mkpa ịmalitegharị sistemụ arụmọrụ maka mgbanwe ndị a ga-arụ ọrụ.
Nke atọ ọzọ iwepụ ngwa na Windows
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ ahụ e kwuru na mbụ anaghị arụ ọrụ, enwere ike iji onye ọzọ, nke ga-ebu ụzọ dabere na iji windo ọnụ iwu, nke na-atụ aro ịnwe kpọọ "iwu ozugbo" (cmd) ma site na ikikere nke nchịkwa; maka nke a, anyị kwesịrị:
Pịa bọtịnụ «bido menu»Windows.
Dee okwu «cmd»Na site na nsonaazụ, họrọ nhọrọ nke ga - enyere anyị aka iji ikikere nchịkwa mee ya.
N'aka nke ọzọ na Windows 8 anyị nwere ike pịa aka nri na akara ngosi menu mmalite wee họrọ iwu ozugbo na ikikere ndị nchịkwa.
Ozugbo windo ngwụcha iwu ahụ ga-emepe, anyị ga-ede akwụkwọ ntuziaka ndị a wee pịa igodo ahụ.ntinye".
Site na usoro anyị tụlere n'elu, a ga-emepụta txt faịlụ na desktọọpụ Windows, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ ahụ, anyị nwere ike ime ya nwayọ na enweghị nsogbu. modifying ikpe ke ikpehe ke akpatre dochie ụzọ nke «Desktop».
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-adị mma ịhapụ okwu ahịrịokwu dịka ọ dị iji chọta faịlụ a na-emepụta ozugbo na desktọọpụ.
Mgbe e mepụtara faịlụ ahụ, anyị ga - pịa ya ugboro abụọ ka ọ mepee ozugbo, na - abịa ebe nke abụọ nke aghụghọ ahụ; faịlụ txt a ga - abụ ndepụta nke ndị ọkwọ ụgbọala awụnyere na Windows, nwere ịchọta ndị na-emepụta ihe na nke anyị kwesịrị iwepụ yana software ya.
Ihe anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ndepụta ahụ bụ akụkụ nke «Kwusaanụ Aha», ị kwesịrị ịdeba faịlụ ahụ nke nwere aha «oemxx.inf». Ọ bụrụ na anyị achọtala ya, ugbu a, anyị ga-ede ihe ndị a n'otu ọdụ iwu ahụ:
Ọ bụrụ na anyị aga n'ihu n'ụzọ anyị si nye ndụmọdụ, ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ jikọtara na nke anyị họọrọ ga-ewepụ kpamkpam.
Site na usoro atọ ndị a anyị kpọtụrụ aha, anyị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ha ka iwepu ụdị ngwa ụfọdụ n'agbanyeghị, anyị nwere ike ịkwado ya enwere ike itinye ya n'ọrụ na njikwa nke otu ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaike n'ime Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ndị ọzọ iji wepu ngwa Windows
32 ma ọ bụ 64 bit, nke ka mma ịrụ ọrụ na Windows?